WAAYIHII WARSAME Q25AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q25AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q25AAD
Warsame iyo Abuu Haniya waa israaceen waxayna geleen qol aan ka dheerayn guriga Warsame degay. Kartoomo qolka dhexyaallay ayuu Abuu Haniya inta fatashay ka soo bixiyay 3 shaati oo cadcad iyo 3 surweel oo kaaki ah oo Warsame u dhiibay. Kadib waxa uu tusay masaajid yar oo dhismaha dhankiisa midig ku yaal “masaajidkuna waa kaas.” Dabadeed meel u dhaxaysa masaajidka iyo guriga cusub ee Warsame degay ayuu Abuu Haniya farta ugu fiiqay “musquluhuna waa kuwaas.” Intaas kadib Warsame oo unifoomkii kolkosha ku sita iyo Abuu Haniya waxa ay u soo dhaqaaqeen dhisme dhanka koofureed ee xarunta ku yaal. Waa qol yar oo ay ku jiraan labo nin oo digsiyo waawayn dabka u saaran yihiin. Abuu Haniya ayaa nimankii ku yiri wa arday cusub magiciisu waa Warsame. Nimankii mid ah inta uu qaanad halkaan ah laacay ka soo bixiyay weel yar oo daboolan inta uu daboolkii ka qaaday ayuu xoogaa bariis ah ku riday kadib na suugo yar dusha ka saaray oo inta daboolay oo bac madow yar ku riday Warsame u soo taagay. Warsame ayaa yiri “maya adeer hadda ayaan soo qadeeyay waxba ma cuni karo” Abuu Haniya ayaa ku yiri “dhib ma leh casho ka dhigo, weelkaasna yuusan kaa lumin. Quraac, qado iyo casho halkaan ayaad imaanaysaa adiga oo weelkaaga wato haddii aad ka soo tagtid cunto ma lihid.” Abuu Haniya waxa uu Warsame geeyay hool yar oo qolka jikada ah ku dheggan “halkaanina waa hoolka qadada iyo quraacda,” ayuu ku yiri.
Abuu Haniya waxa uu Warsame ku celiyay qolkii sariiraha isdulsaaran yaalleen waxa uu na u sheegay in uu berri foog u imaan doono.
Warsame inta uu qubaystay oo macwis iyo funaanad soo xirtay ayuu masaajidkii soo aaday si uu salaadda casir u soo tukado. Masaajidka dadka ku tukadaa waa ardayda, hawlwadeenna iyo ilaalada iskoolka Qaryatayn. Warsame masaajidka ayuu qur’aan isaga akhristay ilaa laga gaaray salaaddii maqrib iyo middii ceshahaba. Warsame oo kitaabka qur’aanka ah akhrisanaya ayaa waxaa soo agfariistay nin buuran oo gar wayn oo madow leh, ninku dhawr jeer ayuu Warsame soo eegay eegmo kakan. Warsame waa uu dareemay laakiin waa uu ka bayray in uu si toos ah xiriir indhaha ah la sameeyo. Ninkii ayaa inta u soo dhawaaday ku yiri “Adeer maxay tahay sida labbisan tahay iskoolka ma dhigatid miyaa?” “Sideen u labbisanahay?” ayuu Warsame ku celiyay. “Maxay tahay macwistaan dhulka jiitamaysaa iyo funaaddaan gacmo gaabka ah? Timahase maxaad isaga gaabin wayday?” Warsame jawaab u ma celin.
Warsame salaaddii ceshaha kadib sariirtiisi ayuu yimid. Sariirtu waa labo qaybood oo isku isdulsaaran Warsame tan kore oo lambar 17 ah ayuu leeyahay tan hoose waxaa jiifta Ciise oo loo yaqaan Dulyadayn. Waxaa kale oo yaalla qolka saddex sariirood oo labo-labo isku dulsaaran.
Dulyadayn oo asaguna masaajidka ceshaha ku soo tukaday ayaan Warsame waxba ka dambayn. Dulyadayn da’ahaan waa Warsame oo kale laakiin waxyar ka madax taagan ka na jidh wayn. Dulyadayn oo fahamsan in Warsame cusub yahay ayaa si wacan u soo dhaweeyay uga na sheekeeyay iskoolka iyo hababka uu u shaqeeyo. Dulyadayn waxa uu Warsame u sheegay in aan iskoolka ardaydu ka bixin karin maalin aan jimcada ahayn. Waxa kale oo u tilmaamay meelaha ardaydu dharka ku dhaqdaan iyo musqulaha iyo goobaha qubayska oo Warsame horay soo arkay. Sidoo kale Dulyadayn waxa uu Warsame u sheegay in salaadda ceshaha kadib ay arday walba waajib ku tahay in uu qolkiisa ku jiro. Sagaalka habeenimana ay qasab tahay in arday walba bustihiisa hoosgalo mararka imtixaanku jiro maahane. Dulyadayn socdaalkii iskool barashada Warsame u wada ayaa soo galay afartii wiil ee sariiraha kale degganaa. Salaamu Calaykum, wa calaykum salaam, kan waa Warsame oo ah arday iyo kan waa Xamsa, kanna Cabbaas kaasna Jubayr kaasna Subayr ayaa la isdhaafsaday markii intaas a isdhaafsaday baa albaabkii la sii riixay hooddi hooddi, waa Abuu Haniya oo buug iyo qalin wata. Dulyadayn, waa i kan, Xamsa, waa kaanaa, Subayr, waa joogaa, Cabbaas waa roogaa, Jubayr, waa i kan, Warsame, waa haa macallin. Salaamu calaykum inta uu yiri ayuu Abuu Haniya dib u noqday. Haddana sagaalkii iyo barkii markii ay goorsheegtadu ahayd ayuu Abuu Haniya soo noqday, markaan qolka layrkii waa la damiyay nin walba sariirtiisa ayuu dul jiifaa. Abuu Haniya oo toosh wata ayaa inta uu soo galay hubiyay in nin walbaa sariirtiisi jiifo markii uu hubiyayna waa iska laabtay. Warsame oo yaabban ayaa widaaygiisa cusub, Dulyadayn ku dhahay “war heedhe meeshu ma xiro millatari baa?” Dulyadayn ayaa inta qoslay yiri “wali yaa isgaaray”. Dulyadayn waxa uu Warsame ku wargiliyay in shanta aroornimo la kaco oo salaadda fajar masaajidka lagu soo tukado kadibna daruusta masaajidka lagu akhtisto ilaa toddobada aroornimo, kadib na quraacda ayaa la aadaa, marka la quraacdana fasallada ayaa la galaa. “Adigu berri fasal ma lihid marka fajarka kadib waad iska seexan kartaa ilaa inta Abuu Haniya kaaga imaanayo,” ayuu Dulyadayn ku yiri Warsame.
Sidaas ayaa Warsame iyo saaxiibkiis kula seexdeen.
Fajarka kadib Warsame masaajidka ayuu qur’aan isaga akhristay markii ardaydii masaajidka ka dareereen ee ay kurshiinkii quraacda aadeen Warsame Asaga oo is leh qolka iska aad oo iska seexo ilaa uu Abuu Haniya kaaga imaanayo ayuu arkay Abuu Haniya oo dultaagan. Abuu Haniya waxa uu Warsame waydiiyay in uu weelkii quraacda sito iyo in kale Warsame na ku jawaab “maya” Abuu Haniya oo xanaaq ka muuqda wajigiisa ayaa yiri “saaka kadib ha ka soo tagin weelka marka aad fajarka u soo kacdo buugaagta iyo weelkaaga horay u soo qaado guriga dib ugu noqon maysid ogow fajar kadib.” Warsame ayaa Abuu Haniya waydiiyay “macallin weelka ma gacanta ayaan ku soo qaadaa oo masaajidka la soo galaa? Tan kale ardayda qof masaajidka weel a soo galay u ma jeedee?” Abuu Haniya ayaa yiri “ardayda walba boorsada ayuu ugu jira ee adiguna boorso haddaad haysatid soo qaado haddii kale anigaa ayaa maanta kuu soo iibinaya”, “macallin ma haysto ee ii soo iibiyay Ilaahay khayr ha ku siiyee.” Abuu Haniya iyo Warsame waa ay israaceen kurshiinkii ayaa Warsame ka sii quraacday. Labo xabbo oo rooti ah iyo xoogaa yar oo maraq ah ayaa la siiyay iyo galaas caano iyo shaah la isku barxay ah.
Kadib waxa ay tageen xafiiska iskoolka laga maamulo halkaas ayaa Warsame sawir looga qaaday loona sameeyay kaarkii aqoonsiga ardaynimada oo lambarkiisu 1678. Dabadeed Abuu Haniya Waxa uu Warsame geeyay fasallada uu wax ku baran doono waxa uu na farta ka soo saaray buugaagtii uu wax ku baran lahaa iyo boorso. Dabadeed Abuu Haniya waxa uu Warsame ku amray in uu madaxa iska soo xiiro labo khamiis oo cadcad oo shanshada dhexdeeda u joogana waa uu soo siiyay. Abuu Haniya waxa uu Warsame ku wargaliyay in maalinta sabtida oo saadambe ah laga qaadi doono imtixaan lagu qiimaynayo aqoontiisa kadibna la fariisin doono fasalka uu u qalmo.
Maalintii jimcada Dulyadayn iyo Warsame waxa aadeen magaalada. Warsame aad ayuu u la yaabay sida magaaladu u baabuur iyo dad badan tahay. Suuqa wayn ee bakaaraha ayuu Dulyadayn ku soo dhexwareejiyay Warsame Inkasta oo magaaladu dagaal-oogayaal u kala xirxirnayd burbur badan oo dagaalladii sokeeye ku reebeenna ka muuqday haddana Warsame waxaas oo dhani u ma muuqan oo waxa ku indhadaraandaray sida magaaladu u cammiran tahay u na ballaaran tahay. Waxa kale oo uu Warsame la yaabay sida magaaladu u dhir badan tahay oo guri walba geed wayn ugu horyaallo.
Maalintii sabtida Warsame waxa uu u fariistay imtixaankii dugsiga sare. Inta badan maaddooyinkii Warsame dhibco sare ayuu keenay. Markii da’diisa iyo dhibcihiisa la isku daray waxaa la go’aamiyay in la fariisiyo fasalka 3aad ee dugsiga sare taas oo macneheedu yahay in uu labo sannadood kaliya dhiganayo dugsiga sare.